Otu esi emepụta ngwa ụlọ na Arduino nzọụkwụ site nzọụkwụ | Akụrụngwa n'efu
una arụ ọrụ ụlọ bụ ụlọ nwere usoro abụọ, sistemụ dị n'ime yana sistemụ mpụga, nke a na-eji ha iji tụọ, jikwaa na gbanye ihe ọ bụla na - eme gbasara ụlọ. Iji mezuo nke a, a na-ejikọ ngwaọrụ ndị dị nro na sistemụ na-anakọta ozi anyị chọrọ ma zaghachikwa arịrịọ anyị.
Ihe ịga nke ọma nke akpaaka ụlọ na ọnwa ndị na-adịbeghị anya bụ n'ihi na ọnụahịa nke ngwaọrụ ndị a adabala nke ukwuu na ekele maka Akụrụngwa Free, ngwaọrụ ọ bụla nwere ike ịmegharị maka ụdị ụlọ ma ọ bụ ọnọdụ ọ bụla. Ihe ndị anyị nwere ike iji wuo onwe anyị.
1 Kedu ihe m kwesiri iji mepụta akụrụngwa ụlọ m?
2 Kedu ihe m kwesịrị ịme iji mepụta ọkụ ọkụ?
3 Kedu ihe m ga - eme iji kpuchido akụrụngwa ụlọ m?
4 Kedu ihe m kwesịrị ịme iji mee ụlọ m ihe ntụ?
5 Kedu ihe m kwesịrị ịme iji chọọ ụlọ m mma?
6 Kedu otu esi enweta onye isi maka akpaaka ụlọ m?
7 Enwere ike nke a ka mma?
Kedu ihe m kwesiri iji mepụta akụrụngwa ụlọ m?
Tupu ị na-ekwu maka obere ọrụ ma ọ bụ ngwaọrụ nke ga - enyere anyị aka ịmepụta akpaaka ụlọ anyị, anyị ga - eme ndepụta nke ihe ndị ọzọ anyị ga - achọ iji rụọ ụlọ a.
Nke mbụ niile bụ inwe ihe ntanetị na njikọ intaneti dị ike nke na-arụ ọrụ n'ime ụlọ, enweghị ike ịnwụ mpaghara ma ọ bụ ọnụ ụlọ nwụrụ anwụ ebe arụmọrụ rawụta enweghị ike iru. N'ọtụtụ ọnọdụ, anyị agaghị achọ njikọ Internetntanetị, mana anyị ga-eji router. N'ọnọdụ ndị ọzọ, dị ka nchebe ụlọ, anyị chọrọ ịnweta Internetntanetị, ya mere ma router na ịnweta arentanetị dị mkpa.
Ihe ozo bu Utu Pi osisi. Na mgbakwunye na ịdị mkpa maka ụfọdụ ọrụ, bọọdụ Raspberry Pi nwere ike ịrụ ọrụ dị ka ihe nkesa na-elekọta arịrịọ niile na iwu nke ihe ọgụgụ isi dị iche iche. Isi ihe dị mma nke iji Pipe Pi bụ obere ya, ike ya na ọnụ ala ya.
Arduino Yún na Arduino UNO Ha ga-abụkwa ndị enyi dị mkpa iji mepụta akpaaka ụlọ. Ma ọ bụ ijikwa ọrụ nke ikuku ikuku ma ọ bụ ijikwa mkpọchi dijitalụ, efere ndị a dị mkpa, ọnụ ala ma bụrụ ihe ewu ewu.
na sensọ ha ga-adị mkpa, mana n'okwu a anyị ga-enwe nnukwu ndidi na ịmara otu esi ahọta sensọ nke ọma ebe ọ ga-abụ n'ụlọ anyị nwere ọgụgụ isi, na-arụ ọrụ ụbọchị niile, ụbọchị 365 kwa afọ, nke pụtara na ọ bụghị ụdị ọ bụla ma ọ bụ akara nke ihe mmetụta ga-arụ ọrụ.
Ọdịnihu nke akpaaka ụlọ bụ na ọ na-arụ ọrụ site na iwu olu, mana ugbu a nke anaghị arụ ọrụ na mpaghara niile yana maka ọtụtụ ihe anyị ga-achọ a smartphone na internet ohere. Ke ofụri ofụri, M nwere ike ikwu iji ihe gam akporo ama ebe ọ bụ na ọtụtụ na-emepụta na-arụ ọrụ ndị ọzọ na a sistemụ karịa Apple si iOS.
Kedu ihe m kwesịrị ịme iji mepụta ọkụ ọkụ?
Ọkụ nke akụrụngwa ụlọ bụ ihe ikekwe rụzuru na afọ ndị a. N'ezie anyị nwere ụdị dị iche iche nke smart bulbs nwere ike itinye na oriọna ọ bụla na ezigbo njikọ, anyị nwere ike ịgbanwe ọkụ ma mepụta gburugburu dị iche iche dabere na oge nke ụbọchị ma ọ bụ mmasị anyị. Ugbu a bulbs ndị a nwere nnukwu ụgwọ, nke pụtara na ọ bụghị mmadụ niile nwere ike ịnweta bulbs niile nke ụdị a.
Uzo ozo na nke a bu iji Igwe ọkụ ọkụ RGB ma jikọọ ha na bọọdụ Arduino Yun, site na nke a, anyị nwere ike ijikwa ọkụ nke ime ụlọ dị n'ụlọ anyị. Igwe ọkụ RGB gbara ọkụ dị ọnụ ala karịa bọlbụ smart na ọdịdị anyị nwere ike inye bụ ihe na-atọ ụtọ karịa bọlbụ ọdịnala, mana ọ bụ eziokwu na bọlbụ smart nwere ngwa ngwa na ngwa ngwa.
Kedu ihe m ga - eme iji kpuchido akụrụngwa ụlọ m?
Nchebe nke ulo bu ihe siri ike ma dikwa oke nkpa. Ugbu a, imepụta akpaaka ụlọ enwere ọrụ dị iche iche nke mkpọchi amamịghe na-emeghe na mkpisiaka ma ọ bụ jiri ama.
Nzọụkwụ nke abụọ ga-abụ itinye ihe mmetụta sensọ n'ime ụlọ niile iji mepụta mkpu ụlọ, ma ọrụ ndị a anaghị arụ ọrụ nke ọma. N'ọnọdụ ọ bụla, nchebe ka na-echere maka akpaaka ụlọ ọ bụ ezie na amaara m ọtụtụ ndị ụlọ ha na-enweghị ọgụgụ isi nwere otu nsogbu.
Kedu ihe m kwesịrị ịme iji mee ụlọ m ihe ntụ?
Igwe ikuku nke ulo domotic siri ike nke ukwuu, kamakwa n'ime ụlọ nkịtị. Nke mbụ, anyị kwesịrị ijide n’aka na a na-edozi ụlọ nke ọma. Nke a dị mkpa n'ihi na ọtụtụ oge ebe anyi gha eji ikuku ikuku nwere ọgụgụ isi anyi agaghi ano n'ulo ma ọ bụrụ na edozighị ya nke ọma, anyị ga-ekpofu kpo oku ma ọ bụ ntụ oyi n'ụzọ na-abaghị uru na enweghị nsonaazụ achọrọ.
Ozugbo anyị nwere ụlọ akpaaka ụlọ dịpụrụ adịpụ, anyị ga-etinye ihe mmetụta sensọ na ya otu Arduino Bluetooth board n’ime ụlọ ọ bụla. A ga-eziga ozi okpomọkụ ahụ na kọmputa dị n'etiti ma ọ bụ Raspberry Pi. Na utu Pi anyị ga-eji algọridim mee nke ahụ mgbe ụlọ ahụ ruru ụfọdụ okpomọkụ ikuku ikuku ma ọ bụ kpo oku na-arụ ọrụ.
N'akụkụ a nke akpaaka ụlọ ọ na-esiri ike ịnweta ebe ọ bụ na ndị na-ekpo ọkụ na ndị na-ekpo ọkụ enweghị ọgụgụ isi na naanị ihe ọzọ maka nke a bụ ịhọrọ nhọrọ ngwọta nke dị oke ọnụ ma na-adabaghị na teknụzụ ndị ọzọ. N'ọnọdụ ọ bụla, a na-enwe ntakịrị ntakịrị ọganihu n'akụkụ a nke akpaaka ụlọ.
Kedu ihe m kwesịrị ịme iji chọọ ụlọ m mma?
Na mbụ anyị ekwuola maka otu esi ahazi ọkụ ma ọ bụ kama etu esi enwe ọkụ ọkụ. Anyị nwekwara ike ịmepụta eriri egwu na-ejikọ ọkụ, si otú a na -emepụta gburugburu nke jikọtara ọkụ na egwu. Ihe kachasị ọsọ na nke a na-enwe smart ọkà okwu.
N'akụkụ a enwere ọtụtụ ụdị anyị nwere ike ịzụta dịka Amazon Echo, Google Home ma ọ bụ Sonos. Ma anyị nwekwara ike ike anyị smart ọkà okwu. Enwere ọtụtụ ọrụ na-anwa ịmepụta ọkà okwu nwere ọgụgụ isi. N’akụkụ a, nkwuputa ụda na-apụta ìhè. Google nyere n'akụkụ Rasberi Pi Zero. A ike, free na ọnụ ala ngwọta karịa ụfọdụ smart ọkà okwu. Ọ bụrụ na anyị ahọrọ ngwọta efu, anyị ga-emerịrị buru n'uche na anyị ga-achọ nnukwu nchekwa iji chekwaa egwu ahụ.
Kedu otu esi enweta onye isi maka akpaaka ụlọ m?
N'ụzọ dị ịtụnanya, otu nke kasị mma akụkụ na-emezuwo na a home akpaaka bụ ihe e kere eke nke mebere na-enyere aka. Ihe ịga nke ọma ha bụ na e wetaara ha smartphones, mbadamba na ngwaọrụ ndị ọzọ.
Iji nweta onye na-egbu egbu ma ọ bụ onye enyemaka na-akwadoghị, anyị ga-enwerịrị ọgụgụ isi nke arụnyere na sava etiti ma ọ bụ na bọmbụ Rasberi nke jikọọ na ngwaọrụ niile. Enwere ọtụtụ uzo ozo dị ka Jasper o Mycroft ma ọ bụ anyị nwekwara ike ịhọrọ maka ngwọta dị iche iche dịka Alexa sitere na Amazon Echo ma ọ bụ Google Assistant si Homelọ Google. Nhọrọ a bụ nke gị.
Enwere ike nke a ka mma?
N'ezie enwere ike ịkwalite ya. N'ọtụtụ akụkụ anyị kwuru na ha nwere ọtụtụ ohere maka imeziwanye ma n'akụkụ ndị ọzọ anyị na-egosighi, esi na ọkụ, enwekwara ohere maka mmelite na nhazi.
Ihe niile ga-adabere na onwe anyị, ụlọ anyị na n'ezie ihe ọmụma anyị na Akụrụngwa efu. N'ọtụtụ ọnọdụ, anyị nwere ike ịmepụta ngwaọrụ nkeonwe na nke nwere ọgụgụ isi nke na-edozi nsogbu ma ọ bụ na-eme ka ngwa ngwa akpaaka ụlọ mara ihe, ọ bụ ihe kacha mma nke Ngwá Ọrụ Nwere Onwe Not cheghị?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Arduino » Otu esi emepụta akpaaka ụlọ site na nkwụsị
Ezigbo ọrụ ya nyeere m aka nke ukwuu
Mepụta asụsụ gị ka onye ntụgharị ntụgharị nke morse